Amabhongo: Ukuzilungiselela ukuLawula, ukukhuthaza, kunye nokwandisa ukusebenza kweQela lakho lokuThengisa | Martech Zone
Amabhongo: Ukuzilungiselela ukuLawula, ukukhuthaza, kunye nokwandisa ukusebenza kweQela lakho lokuThengisa
NgoLwesithathu, Matshi 17, 2021 NgoLwesithathu, Matshi 17, 2021 UBrian Trautschold
Ukusebenza kwentengiso kubalulekile kulo naliphi na ishishini elikhulayo. Ngeqela lokuthengisa elibandakanyekayo, baziva bekhuthazekile kwaye benxibelelene neenjongo zombutho kunye neenjongo zabo. Impembelelo ezimbi zabasebenzi abangasebenziyo kumbutho zinokubaluleka-njengokungabikho kwemveliso, kunye nokuchitha italente kunye nezixhobo.
Xa kufikwa kwiqela lokuthengisa ngokuthe ngqo, ukungabikho kothethathethwano kunokuxabisa amashishini kwingeniso ethe ngqo. Amashishini kufuneka afumane iindlela zokubandakanya amaqela okuthengisa, okanye ukwakha umngcipheko kwiqela eliqhuba kakubi elinemveliso ephantsi kunye nenqanaba eliphezulu lokubuya.
Iqonga loLawulo lokuThengisa ukuThengisa
U kufuna liqonga lolawulo lokuthengisa elingqamanisa lonke isebe lokuthengisa, umthombo wedatha, kunye nokusebenza kweetrikri kunye kwinkqubo enye elula. Amabhongo abonelela ngokucacileyo kwaye abonisa uhlalutyo lwexesha lokwenyani kuyo yonke imibutho yentengiso.
Sebenzisa ujongano olulula lokutsala kunye nokwehla, nkqu neenkokheli ezingezizo ezobuchwephesha zingenza amakhadi amanqaku, ukhuphiswano, iingxelo kunye nokunye. Nazi ezinye iindlela ezimbalwa iinkokheli zentengiso ezisebenzisa i-Ambition kwi-tech stack yazo.
Thatha iPeloton uyiguqulele kwisoftware yamaqela athengisayo kwaye une-Ambition- ukuqeqesha okukhuthazayo okudityaniswe nebhodi yabaphambili. NgePeloton, abakhweli banokubona ukuba bame phi xa bekhwela ngelixa besandisa imveliso yabo. Ngokusebenzisa isoftware ye-Ambition yesoftware, iinkokeli zentengiso zinokudala amava afanayo kukhuphiswano lwefantasy, ukuthengisa iiTV, iibhodi zabaphambili kunye nee-SPIFF ukunceda ukuqhuba utshintsho olunentsingiselo kumbutho.
I-Gamification ijikeleze amashumi eminyaka, ngendlela enye okanye enye. Amaqela okuthengisa afumene ixabiso ekudaleni izikhuthazi kunye nokukhuthaza ukhuphiswano ukwenza ukubandakanyeka okuphezulu kunye nenqanaba lokukhuthaza phakathi kwabafundi. Emva kwayo yonke loo nto, ngubani ongaluthandiyo ukhuphiswano oluncinci?
Ukukhuthazwa kukutshintsha ngokukhawuleza komsebenzi okude, i-gamification iguqukile ukusuka "kumnandi-ukuba" uye "kwisidingo-sokuba". Uxanduva lokuphendula phakathi kwamaqela lubaluleke ngakumbi njengoko amaqela okuthengisa engasekho kumgangatho wentengiso. I-Gamification inokubonelela iinkokeli zentengiso ukuba ziqonde indlela abaqhuba ngayo abo basebenza ekhaya kwaye babavumele ukuba bakhuthaze ukhuphiswano olusempilweni.
Isoftware yokuQeqesha ukuThengisa
Umqeqeshi wokuthengisa ngowona mphumo ukhokelela kumgangatho wentengiso kwaye, emva koko, ube nefuthe elihle kwiqela lokuthengisa xa lilonke. Nokuba yeyiphi na imboni, ingeniso yingxaki eyaziwayo kwintengiso, kwaye amathuba ophuhliso lobuchwephesha angadlala indima kwisizathu somsebenzi sokuhlala.
Ngamaqela awasekho phantsi, Iinkokeli zentengiso azinakho ukuma ngakwidesika yabaphenyi kwaye babuze ukuba baqhuba njani, jonga apho bafuna uncedo okanye baphendule imibuzo emide. Nangona kunjalo, nge-Ambition, ukuqeqesha ukuthengisa kwenza kube lula kubaphathi bezentengiso njengoko beqhubeka nokulungelelanisa nomoya wabo okude. Kwiinkampani ezinkulu nezincinci, iinkokheli zentengiso zinokuseka iintlanganiso eziphindaphindayo, zirekhode iincoko, kwaye zigcine izicwangciso zamanyathelo endaweni enye. Inkqubo eguquguqukayo kunye neyomeleleyo ivumela iinkokheli ukuba ziyile ezazo iinkqubo kwaye zenze iintlanganiso ezizenzekelayo ukuze, xa ubomi bube sendleleni, iintlanganiso sele zibekiwe.
Ingqondo yokuThengisa kunye noLawulo lokuSebenza
Iqela lokuthengisa liyinjini egunyazisa lonke ishishini. Inkqubo yolawulo lwentengiso yenkampani kufuneka ijolise ekugcineni le njini igcinwe kakuhle, uqeqesho lubuyela kwizakhono abazifunayo ukufezekisa iinjongo zombutho kunye nokujonga inkqubela phambili yabo njengoko beqhubela phambili.
Ngedatha yeCRM yokufumana amandla kwimveliso yokufumana amanqaku kunye nokhuphiswano, iinkokeli zentengiso zinokuqiniseka ukuba abaphenduli babo bangena kuyo yonke imisebenzi yabo, iinjongo zabo, kunye namanqaku kubathengi banamhlanje nabanokubakho. Iinkokheli zentengiso zikwanokubonakala kwiifowuni ezigqityiweyo okanye ii-imeyile, kunye neentlanganiso ezicwangcisiweyo okanye ezigqityiweyo, kwaye ujonge ukubuyela kwimveliso yesine ukubona ukuba ngubani oguqula imisebenzi ibe ziinjongo kunye neziphumo.
Abaphathi bezentengiso bajonge ukufumana ukuqonda kwintsebenzo yabo yemihla ngemihla yokuthengisa, iqonga le-Ambition libonelela yonke intengiso kunye nekhadi lokubala elibandakanya iithagethi zemihla ngemihla. Iinkokheli zentengiso zinokubona ukuba ngaba i-rep ishiye usuku ngaphandle kokugqitywa kwemisebenzi ye-100% kwaye ivumela ukuba bacwangcise iseshoni yokuqeqesha ngokukhawuleza ukunceda aba-reps ukuba babuyele emgceni. Ngelixa kungekho kunene indlela yokujonga indlela abathengisa ngayo abaqhubi, besebenzisa inkqubo yolawulo lwentengiso, njenge-Ambition, inokuqinisekisa ukufikelela kulwazi oluthembekileyo kunye nokuvumela abathengisi kunye neenkokheli zentengiso ukuqonda ukulungisa ikhosi yabo.
phezu Abaphathi bezentengiso abangama-3,000 Lungiselela ukuzimisela ukunceda ukuqhuba ezinye iifowuni, ukubhukisha iintlanganiso ngakumbi, kunye nokubhiyozela ukuthengisa okuvaliweyo kumaqela wabo okude okanye e-ofisini. Uninzi lweenkokheli zentengiso zijonge ukuhambisa inani lamaqonga abawasebenzisayo, ukuvelela kuyakwenza konke. Ukusuka ekuqeqesheni ukuthengisa ukuya kwiibhodi eziphambili, ukuvelela kunceda iinkokeli zentengiso ukuba zenze izigqibo ezikrelekrele ngakumbi nezicwangcisiweyo ezivumela iqela ukuba lenze imisebenzi elawulwa ngcono efunekayo yokuhambisa iziphumo.
Amabhongo adibanisa ne-Salesforce, i-Slack, i-Dialsource, i-Cisco, i-ringDNA, i-Velocity, i-Gong, i-SalesLoft, i-Chorus kunye ne-Outreach… Amaqela e-Microsoft ayeza kungekudala. Ukufunda ngakumbi nge-Ambition kunye nendlela yokulawula ukuthengisa kwakho kwakhona:
Cwangcisa i-Demo ye-Ambition namhlanje
tags: u kuthandaciscoCRMIzixhobo zoncedointengiso yeshishinigongAmaqela eMicrosoftukufikelelaringDNAukuthengiswa kwemidlaloulwazi lokuthengisaUlawulo lokuthengisaiimetriki zokuthengisainkuthazo yokuthengisaintengiso yokusebenzaulawulo lwentengisoimveliso yentengisoingxelo yokuthengisaikhadi lamanqaku lokuthengisaiqela lokuthengisaukuthengisaIntengisoLoftMusaVelocity
UBrian Trautschold ngumseki kunye no-COO U kufuna, iqonga lolawulo lwentengiso elaziwayo elakhelwe imibutho yokuthengisa eqhutywa yidatha kunye neminyaka eliwaka. Nxibelelana noBrian kwi-Twitter nakwi-LinkedIn kwaye uqalise incoko ngezinye zezihloko azithandayo: Ukuthengisa, ukuqala, ukuthengisa, kunye namahemuhemu ezorhwebo e-NBA.
I-JungleScout: Izixhobo kunye noQeqesho lokuSungula kunye nokukhulisa ukuthengisa kwakho kwiAmazon
I-AddEvent: Yongeza kwiNkonzo yeKhalenda yeeWebhusayithi kunye neeleta zeendaba